Xa uthatha isahluko sokuqonda sokufunda kwanoma yimuphi uvavanyo olumiselweyo - nokuba yi- SAT , ACT , GRE okanye enye into-uya kuba nemibuzo embalwa malunga nenjongo yombhali . Ngokuqinisekileyo, kulula ukubonisa esinye sezizathu ezibonisa ukuba umbhali unobhala njengokwenza umdlalo, ukuchukumisa okanye ukwazisa, kodwa ngovavanyo olulinganiselweyo, ezo ziqhelekanga zikhetho ozifumanayo. Ngoko, kufuneka uyenze injongo yombhali ngaphambi kokuthatha uvavanyo!
Zama isandla sakho kulezi zilandelayo zilandelayo. Bafunde ngoku, uze ubone ukuba ungayiphendula imibuzo engezantsi.
Izibonelelo ze-PDF zootitshala
Injongo yoMbhali Umsebenzi 2 | Injongo yoMbhali Phendula Ingundoqo 2
Injongo yoMbhali Injongo Umbuzo # 1: Ukubhala
Abaninzi bethu bacinga (ngokuphambukayo) ukuba abalobi bahlala phantsi baze baphuphe isicatshulwa esimangalisayo, ibali okanye inkondlo ngokuhlala kwelinye i-flash of genius kunye nokuphefumlelwa. Oku akunjalo. Ababhali abanolwazi basebenzise inkqubo yokubhala ukususela ekuqaleni ukuya ekugqibeleni ukubanceda babhale umbhalo ocacileyo. Ukuba awuyi kubonakalisa ukubunjwa kwakho kwizigaba kwaye wenze utshintsho njengoko uhlakulela, awuyi kubona zonke iingxaki okanye iimpazamo kuyo. Ungazami ukubhala incoko okanye ibali kanye kanye kwaye ushiye ikamelo. Le mpazamo eyenziwa ngabalobi be-novice kwaye iya kuba yinto ecacileyo kumfundi onolwazi. Hlalani nijonge ngomsebenzi wenu. Cinga malunga nento oyibhalileyo. Kulungile, sebenzisa inkqubo yokubhala apho ubhala khona kwaye uceba, ubhale uhlaka olubi, uququzelele iingcamango, uhlele, kwaye uhlalutye. Ukubhala kwakho kuya kuba nemiphumo yemiphumo engenzi kakuhle.
Umbhali unokuba wabhala umhlathi ukuze:
A. cacisa inkqubo yokubhala kumntu ongenakuqhelana naye.
B. bonisa ukuba abalobi abatsha basebenzise inkqubo yokubhala ukwenza umsebenzi wabo.
C. ukuchonga iincandelo zenkqubo yokubhala kunye nendlela efanelekileyo yokubandakanya kwisakhiwo.
D. qhathanisa ukubhala komlobi we-novice kunye nomlobi onolwazi.
Injongo yoMbhali Injongo yombuzo wesi-2: Umntwana osweleyo
Endleleni ephezulu, emva kwesango lomyezo omkhulu, ekupheleni kwayo ingaqatshelwa ukuba imhlophe emhlophe yendlu ehlambulukileyo ihlambuluke ilanga, yayingumntwana omhle, omtsha, egqoke kwiingubo zelizwe eziqhekezayo. Ihotele, inkululeko kwiinkathalo, ukubonakala kobutyebi kwenza abantwana abanjalo bahle kangangokuba umntu ulingwa ukuba acinge ukuba ibumbwe yento ehlukileyo evela kubantwana be-mediocrity and poverty.
Ngaphandle kwakhe, elele ngotshani, yayingumdlalo oyingqumbo, njengomnini wayo omtsha, oqhenqileyo, obunxiweyo, obhincelwe ngengubo ebomvu kwaye egutyungwe ngamagqabi kunye neengcingo zeglasi. Kodwa umntwana wayengaqapheli umdlalo wakhe oyintandokazi, kwaye yilokho ayekhangela kulo:
Ngakolunye uhlangothi lwesango, ngaphandle kwendlela, phakathi kweenkumbi kunye neengqungquthela, kwakungomnye umntwana, ongcolileyo, ogulayo, ococekileyo nge-soot, enye yezo ntlungu-abantwana abangaboniyo buso babengafumani ubuhle, njengeliso umgcini unokwenza umzobo ococekileyo phantsi komgca wokutyhafaza, ukuba nje kuphela i-patina ehlaselayo yobuhlwempu yahlanjwa. - " I-Toy Poor Child's Toy" nguCharles Baudelaire
Umbhali unakho ngokubhekiselele ekubonakala komntwana osweleyo kumhlathi wokugqibela ukuze:
A. ukuchonga imbangela yentlupheko yomntwana.
B. ukwandisa impendulo yomzwelo ngomfundi kumntwana.
C. ukugxeka ukukhuliswa kweentlalo eziza kuvumela umntwana ukuba ahlupheke ngendlela enjalo.
D. uqhathanisa ubuhlwempu bomntwana wesibini kunye nelungelo lokuqala.
Injongo yoMbhali Injongo Umbuzo # 3: Ubugcisa
Ihlabathi le-tech-high clocks kunye neeshedyuli, iikhompyutheni kunye neenkqubo kwakufanele zisisindise ebomini bokubhokoxa kunye nokunyanzelwa, kodwa nangosuku ngalunye oludlulileyo uluntu lwaba lukhoboka, luxhaphazwa kwaye luhlukunyezwa. Izigidi zilambile ngenkathi abantu abambalwa behlala ngokukhazimulisa. Uluntu lwabantu luhlala luhlukaniswe ukusuka ngokwawo kwaye lugqitywa kwihlabathi lezendalo elikulo luluntu oluphambili.
Ngoku siyilungisa ixesha lokuzibonakalisa ihlabathi, ukugxotha kwiiskrini ze-elektroniki ze-silicon chips, ixesha lehlabathi eliphambuke ngokupheleleyo kwixesha eliqhambileyo isiqhamo, okanye i-tide ithatha. Sizikhukhulile kwixesha lehlabathi lendalo kunye nexesha elenziwe lizwe apho amava angakwazi ukulandelwa kuphela kodwa engasabonakali. Iimpawu zethu zeveki kunye nomsebenzi wokuphila zigqitywa zizivumo zengqondo, umanyano onganyaniyo wobuchule kunye namandla. Kwaye kunye nentsuku nganye yamandla kagesi kunye nokuhlwa, sisakhula ngakumbi, sisodwa kwaye sisodwa, sinokulawula kwaye sincinci. - " Ixesha leMfazwe" nguJeremy Rifkin
Umhlathi wokuqala wombhali usebenza ngoku:
A. qaphela iindlela eziphambili abantu abazisebenzisa ukulungiselela ubomi babo.
B. ugxeke iteknoloji kuba ibangela ukuba abantu baphenduke kwihlabathi lemvelo.
C. ibonisa indlela abantu abaxhaphazwa ngayo yi teknoloji.
D. uchaza indlela abantu abaye bahlula ngayo kwihlabathi lemvelo kwaye bafumene iteknoloji.
Injongo yoMbhali Injongo Yombuzo Umbuzo wesi-4: Ukuphahlazeka kwempahla
(Isebe lase-US le-Interior Bureau of Management Land)
Xa abaninzi abantu bacinga ngokuphahlazeka kwekhephe, bacinga ukuba i-asele yomthi omkhulu okanye onqatyisiweyo yintsimbi iqhutywe ngaphantsi kolwandle. Intlanzi ibhukuda kwaye iphume kwinqanawa edibeneyo, kwaye i-coral kunye ne-seaweed ibambelele kumacala ayo. Okwangoku, abahlukahlukeneyo kunye neekhamera zokuhamba kunye neekhamera zihamba ngeendlela zokungena ngaphakathi ukuze zihlolisise ngaphakathi kwinqanawa ende. Basenokufumana nantoni na kwiibumbi zakudala baye kwiinqununu ezinokugqithisa igolide, kodwa into enye into eqinisekile: amanzi atyubileyo atshise umkhumbi aze agcine ifihla ixesha elide.
Okumangalisayo kukuba, ngamanzi ayisoloko isisidingo esibalulekileyo ekukhungulweni kwemikhumbi. Bambalwa abantu abaqaphela ukuba izinto ezininzi ezibalulekileyo zokukhupha iinqanawa ziyafumaneka kwilizwe. Ukuthengwa kweenqanawa, iinqwelo zemfazwe kunye neepirate ze-pirate ziye zafunyanwa zingcwatywa ngokungcwatyelwa emanzini, ezintabeni, nakwiindawo zokulima.
Umlobi unakho ukubhala le mihlathi emibini ukuze:
A. xelela umfundi ngeendawo ezikhethiweyo zokuthungulwa kweenqanawa ziye zafunyanwa.
B. uchaza oko umntu angakufumanisa ukuba uhambele umkhumbi.
C. qhathanisa ukufana phakathi kwekhefu elifunyenwe ngumkhumbi kunye nomkhumbi owenziwe ngumhlaba.
D. ukuqinisa ukufunyanwa kwekhephe ngokuphazamiseka komfundi ngeendawo ezintsha zokufumana.
Injongo yoMbhali Injongo yombuzo wesi-5: Ukutya
Xa umntu evula umlomo wakhe ukuba adle, wenza isisombululo esondlo. Ezi zikhethi zenza umehluko ocacileyo kwindlela umntu abukeka ngayo, evakalelwa, kwaye eqhuba emsebenzini okanye edlala. Xa ukulungiswa kokutya okufana neziqhamo ezitsha, iifuno ezinamagqabi, izityalo ezipheleleyo kunye neeprotheni ezixhambileyo zikhethwa kwaye zidliwe, iziphumo ziba ngamanqanaba afanelekileyo kwimpilo namandla ukuvumela umntu ukuba asebenze ngendlela efunekayo. Ngakolunye uhlangothi, xa ukhetho luquka ukutya okucwangcisiweyo njengama-cookie, i-crackers, kunye ne-sodas, izinto ezizaliswe ushukela, i-hydrogenated fats, iikhemikhali kunye nezilondolozo-zonke ezinokulimaza ngobuninzi - imiphumo ingaba yimpilo embi okanye amandla amancinci okanye zombini .
Izifundo zezidlo zaseMelika, ngokukodwa ukutya okusemncinci, zityhila imikhuba engadliyo yokutya njengoko kubonakaliswe ngamanani obuncinane nabangaphantsi kobuncinane. Abazali, abafanele ukuba babe ngabaphathi beendlela zabo zokutya, batyeke ukukhetha ukutya okunempilo kubantwana babo, abangenalo ulwazi olwaneleyo lokwenza izigqibo eziphilileyo. Ukuba nabani na onokusola ngxaki yobunzima bomntwana e-United States namhlanje, ngaba abazali abavumela abantwana babo ukuba badle ukutya okunokondla okunesondlo.
Umbhali usenokusebenzisa igama elithi "lizaliswe ushukela, i-hydrogenated oil, iikhemikhali kunye nezilondolozo - zonke ezinokungonakalisa ngobuninzi" ukuze:
A. ukugxeka ingxaki yokukhula kunamafutha e-United States.
B. ukungafani kokukhetha okungafanelekanga kubantwana baseMerika ngokukhetha ngokufanelekileyo.
C. ukuchonga iikhemikhali ezikhokelayo ekutya okucutshungulwa ukuze abantu bazi into yokuphepha.
D. ukwandisa ukuphendula okungalunganga kokutya okucutshungulwayo.
12 Iingoma eziphambili zeR & B Break-Up
I-Bitumen - I-Archeology kunye neMbali ye-Black Goo
Ziziphi iifilimu ezise 'Swiwi' iTaga?
Ngaba Ukhuphe? Zama ukuguqula kwisiCwangciso sokuKhusela